‘सांस्कृतिक सद्भावको निम्ती अभियान चलाउँछु’ « Naya Page
‘सांस्कृतिक सद्भावको निम्ती अभियान चलाउँछु’
आदिवासी जनजातिहरुले दशैं मनाउनु हुन्न मनेर कडा मत राख्ने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता आङ्गकाजी शेर्पा दशैं पर्वको कडा आलोचक हुन् । राज्यले आदिवासी जनजातिहरुको संस्कृतिलाई दबाउन दशैं पर्वलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको भन्दै चर्को आलोचना गर्दे आएका थिए, शेर्पाले । तर, तिनै शेर्पा यसपालीको दशैंमा फरक रुपमा देखिए । सधैंका दशैंमा चर्को दशैंकाे नै आलोचना लेखेर बस्ने शेर्पाले यसपालीको दशैंमा धेरैलाई अचम्भित बनाए । दशैंको टिकाको दिन बिहानैदेखी आफ्नो नीजि गाडी लिएर सडकमा निस्किए । गन्तव्यसम्म लगीदिन्छु भन्दै आफ्नो गाडीमा चढ्न अनुरोध गरे ।
आफन्ता कहाँ टिका लगाउन जानेहरुलाई दशैंको शुभकामना बाढ्दै गन्तव्यसम्म निशुल्क लगिदिए । बाटोमा गाडी नपाएर अलपत्र परेकाहरुलाई ‘कहाँ जाने हो ?’ म पुर्‍याएर दिन्छु भन्दा धेरै अचम्भित भए । मञ्चमा निकै आक्रमक देखिने शेर्पा सडकमा शालिन रुपमा सेवामा जुटेको देख्दा धेरैलाई ‘सरप्राइज’ नै भयो । आखिर किन त शेर्पा यसरी ‘यूर्टन’ भए ? ‘सांस्कृतिक सद्भावको लागि सुरु गरे,’ शेर्पाले नयाँ पेजसँग भने, ‘अब अभियान नै चलाउँछु ।’ शेर्पासँग गरिएको कुराकानी :-
दशैं मान्नेलाई सघाउन अभियान नै सुरु गर्नुभयो नी किन ?
नेपालमा बिभिन्न धर्म र संस्कृतिप्रति आस्था राख्नेहरु छौं । दशैं मान्नेहरु पनि छन् । हामी नमान्नेहरु पनि छौं । हिन्दुहरुले दशैं मनाइरहदा हामी फुर्सदिला हुन्छौं । निकै लामो बिदा भएकोले पट्यार लाग्दो नी हुन्छ, हामीलाई । सबै बिदा हुन्छ । गएका दशैंहरुमा मैले काठमाडौंको सडकमा गाडी नपाएर धेरै अलपत्र परेको अवस्थामा भेटेको थिए । टिकाको दिन सार्वजनिक गाडी चल्दैन । आफ्ना नीजि सवारी साधन नहुने सर्वसाधरणहरुले निकै ठुलो सास्ती सहनुपर्छ । गाडी नपाउदा आफ्ना आफन्ता कहाँ पुग्न धेरै समस्या भइरहेको हुन्छ । मैले तथ्यलाई मध्यनजर गरेर यो अभियान सुरु गरेको हुँ । सामाजिक तथा संस्कृतिक सद्भाव पनि हुने । मानवीय सेवा पनि हुन्छ । कम्तीमा हामी जस्ता दशैं नमनाउनेले मनाउनेहरुलाई सहयोग गरेर सांस्कृति सद्भाव पनि बढाऔं भनेर पनि हो ।
दशै टिकाको दिन कहाँ कहाँसम्म पुर्‍याइदिनुभयो ?
टिकाको साइत सुरु हुन साथ म गाडी लिएर सडकमा निस्किएँ । साइतको समयदेखी बेलुकी ५ सम्म सेवा सञ्चालन गरे । मैले कपनदेखी पेप्सीकोला, काँडाघारी, जोरपाटी, धुम्बारही, बुढानिलकण्ठ लगायतका ठाउँमा पुर्‍याइदिए । बेलुकीसम्मा १० टिप गरे । १० टिपमा करिब ६०/७० जनालाई गन्तव्यमा पुर्‍याए ।
यो अभियान चलाएर खास के सन्देश दिन खोज्नु भएको हो ?
मैले सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भावका लागि हो यो अभियान सुरु गरेको । मैले लामो समय हङकङको ब्रिटिस गोरखा सैनिकहरुको स्कुलमा काम गरे । त्यहाँ छदा चाइनिजहरुको पर्व भएको बेला गोरखा सैनिकहरुले चाइनिजहरुलाई सहयोग र सेवा गर्दथे । गोरखा सैनिकहरुको पर्वको बेला चाइनिजहरुले सहयोग गर्दथे । एकले अर्काको चाडपर्वमा सहयोग गर्दा सहज हुन्थ्यो । तर, हामी कहाँ त्यस्तो छैन । दशैंको बेला हेर्नुहोस् सार्वजनिक यातायातको साधन सञ्चालन हुदैन । धनीहरुले पो नीजि सवारी चढ्छ । नीजि सवारी नभएकाहरुले असाध्यै सास्ती खेप्नुपर्छ । हामी जस्ता दशैं नमान्नेहरुले सेवा गरीदिए धेरै सहज हुन्छ । मैले अभियान सुरु गरेपछि धेरै साथीहरुले यो अभियानमा साथ दिने बताउनुभएको छ । अर्को सालदेखी हामी समुह नै बनाएर अभियान चलाउछौं । एउटा कल सेन्टर नै स्थापना गर्नेछौं । कसलाई अप्ठ्यारो पर्छ, त्यो कल सेन्टरमा फोन गर्नुहुनेछ । हामी कम्तीमा ५० ६० जनाको समुह नै बनाएर यो अभियान चलाउनेछौं । अन्य समुदायकाले यसरी नै छट, ल्होसार, उद्यौली, उभौली, जितिया पर्वमा सहयोग गरेमा हामीबिचको सद्भाव पनि बढ्छ ।
तपाईले यो काम गरिसकेपछि कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
असाध्यै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु । यो अभियानमा सामेल हुने चाहना धेरै साथीहरुले जनाउनुभएको छ । यात्रुहरु सुरुमा त म गन्तव्यमा लगीदिन्छु भन्दा पत्याएनन् । छक्क परे । मैले पैसा चाहिन्न, म गन्तव्यसम्म पुर्‍याइदिन्छु भन्दा अप्ठ्यारो माने । तर, पछि आफ्नो उद्देश्य बारेमा बताएपछि सबै खुसी भए । दंग परे । बाटोमा गफ गर्दै शुभकामना आदनप्रदान गर्यौं । बाहिर साथीहरुले पनि राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । दशैं मनाउने समुदायको पनि राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छु । सांस्कृतिक सद्भावको पक्षमा मैले सुरु गरेको यो अभियानले सकारात्मक सन्देश दिएको छ भन्ने लाग्छ ।